सुदूरपश्चिममा बूढी पोल्ने पर्व मनाइँदै | Capital Khabar ::
गृह देश सुदूरपश्चिममा बूढी पोल्ने पर्व मनाइँदै
सुदूरपश्चिममा बूढी पोल्ने पर्व मनाइँदै
बैतडी, १ असोज (रासस) ः सुदूरपश्चिमभरी आज बूढी पोल्ने पर्व मनाइँदैछ ।
विजय उत्सवका रुपमा मनाइने यस पर्वमा बूढी अर्थात् राक्षसीे पुतनालाई पोल्ने गरिन्छ । पुराणअनुसार कृष्णले राक्षसी प्रवृत्तिकी पुतनालाई मारेपछि उनका साथी गोठालाले पुतनाको शव दहन गरेको कथन रहेको पं दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो ।
द्वापर युगमा विषाक्त दूध सेवन गराई बालबालिकाको ज्यान लिने गरेकी पुतनालाई कृष्णले दूध चुसी मारेको र कृष्ण बाँचेको खुशीयालीमा असोज संक्रान्तिका दिन यो पर्व मनाइने गरिएको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा भाद्र संक्रान्तिका दिन गाडिएको सल्ला वा अन्य बोटबिरुवाको लिङ्गोमा आज साँझपख बूढी पोलिने र सोही ठाउँमा काँक्रा खाँदै लुतो बाँड्ने प्रचलन छ ।
ओल्के संक्रान्तिका दिन गोठालाले बूढीको प्रतिमा राखेर त्यसमा दैनिक रुखका हाँगा थप्ने गर्छन् । दैनिक थप्दा केही स्थानमा निकै ठूलो बूढी बन्ने गर्छ । गाई गोठालाले बाँझा जग्गा र दोबाटामा सल्ला, बाँज, खर्सुलगायत रुखबाट निर्मित बूढीको पुत्लालाई साँझपख जलाउने गर्छन् । दोबाटामा जलाइएको पुतनाको आकृतिबाट जलेको खरानीको तिलक गाईलाई लगाउने चलन पनि छ । यसो गरेमा पशु चौपायामा कुनै रोग नलाग्ने धार्मिक जनविश्वास छ ।
ओल्के संक्रान्तिका दिन गाउँ नजिकैका अलिक उँचो टाकुरामा सबै मिलेर रूखका हाँगाबिगा, झ््याङ तथा अन्य बोटबिरुवा काटेर एक ठाउँमा थुप्रो बनाइन्छ । सो थुप्रालाई स्थानीय भाषामा ‘बूढी हालेको’ भन्ने गरिएको छ । सो बूढीलाई नै आज असोज संक्रान्तिका दिन साँझ प्रत्येक घरघरबाट आगोको राँको एकै पटक निकाली एकैसाथ पोलेर ‘बूढी पोल्ने’ पर्व मनाउने परम्परा छ ।
पुतनाको स्वरुपमा तयार गरी सिंगारिएको बाबियोलाई आज बिहान गोठबाट निकालेर दिनभरी घाममा सुकाई साँझ दोबाटामा लगेर जलाउने गरिन्छ । गोठालाहरुसाँझपख काँक्रो चपाएर जलेको पुतनामा फाल्दै जोडले ‘थुई बूढी थुई’ भन्ने गर्छन् ।
त्यस्तै बूढी पोलेर घर फर्किने क्रममा बाटा बाटामा बलेको दियो पनि गाड्दै जाने प्रचलन छ । यस पर्वमा रातभरी डेउडा, भुवा जस्ता साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिने चलन पनि छ ।
अघिल्लो लेखमामनाङमा स्याउ टिप्न थालियो
अर्को लेखमासावधान यी १० लक्षण देखिए भने ग्यारेण्टी हो की तपाईलाई क्यान्सर लाग्दै छ ! पुरा पढ्नुहोस !
वाम कार्यकर्ता काङ्ग्रेस पार्टी प्रवेश, राजेन्द्र बजगाइ भन्छन जित सुनिश्चित
टानमा नवनिर्वाचित दाहाल नेतृत्वले पदभार ग्रहण गर्‍यो
मिनकुमार र कोनिकाले ‘तिम्रो नामको टाटु मेरो यो दिनमा कोर्छु भन्दै...
जन प्रगतिशील मंच युएई द्वारा शोक वक्तव्य जारी
प्रकाशको निधनपछि एमालेको देशैभर चुनावी कार्यक्रम स्थगित
आन्तरिक राजश्व क्षमताको उपयोग कमजोर
नक्कली भारतीय नोटसहित बारामा ३ जना पक्राउ